Iifayile ze-8.3 zetekisi - i-Geofumed
8.3 iZimbo Text
Isitayela sokubhaliweyo sisona nje inkcazo yezinto ezahlukeneyo zobuncwane phantsi kwegama elithile. Ku-Autocad sinokudala zonke iifayile esizifunayo kumzobo kwaye sinokudibanisa into nganye yombhalo ngesitayela esithile. Isalathiso esinxulumene nale nkqubo kukuba iifayile ezenziwe zigcinwa kunye nomzobo. Kodwa ukuba sifuna ukusebenzisa isitayela sefayile esele idalwe kumzobo omtsha, kukho iindlela zokungenisa njengoko siza kubona kwisahluko esinikezelwe kwizixhobo kwimidwebo. Enye inokwenzeka kukuba senza iqoqo lethu leetekisi zetekisi kwaye sibhala kwi template apho sisekwa khona imisebenzi yethu emitsha. Ukongezelela, sinokuguqula isitayela esele sikhona, zonke izinto zetekisi ezisetyenzisiweyo ziya kuhlaziywa ngokukhawuleza kumzobo.
Ukudala indlela isicatshulwa, sisebenzisa 'umnyele lwencoko iqela "Okubhaliweyo" siye zikhangela, nakuba loo nto nayo iyafumaneka kwi-drop-down kuluhlu olucaziweyo uhlobo lwe sele wadala kananjalo "Annotation' tab" iqela le Ikhaya ". Kukho nawuphi na, "umphathi wesitayela sombhalo" uvula. Isitayela esele ngcaciso ichazwa ngokuthi "Standard". Isiphakamiso sethu xa sisebenzisana ne "Text Style Manager" kukuba awukwazi ukwenza utshintsho kwi-"Standard" isitayela, kodwa ukuba uyisebenzise njengesiseko sokudala abanye ngeqhosha "elitsha". Ingqiqo ebonakalayo kukuba igama lohlobo olutsha lubonisa injongo yokuba isitayela iya kuba nomzobo. Ngokomzekelo, ukuba kuya kuba luncedo ukubeka amagama ezitrato kwidolophu yasezidolophini, akukho nto ilungileyo, nangona ibonakala ibonakala ingakumbi, kunokubeka "igama lesitrato". Nangona kwezi zihlandlo zikho imigaqo esele imiselwe ukubiza izitala zecandelo ngalinye lezentengiselwano okanye, nokuba yinkampani ngayinye ekhoyo. Ukumisela umgaqo wendawo yokusebenzisana kunye ne-Autocad, kuqhelekile ukuba ugweme abakhandi bezithombe ukuba benze amagama abo angamahhala angabonakalisa umsebenzi wabanye.
Ngakolunye uhlangothi, kule ngxoxo ungabona uluhlu lwamagama afakwe kwiWindows. Kuloluhlu longeza ii-AutoCADs ukuba unokwazi ukwahlula ngokulula ".shx". Iindidi zefonti ezifakwe kwi-Autocad zinamafomu alula kwaye zisebenza ngokugqibeleleyo ngenjongo yokudweba lobugcisa, nangona kunjalo, uya kufumana ukuba xa udala isitayela sakho sombhalo, unayo phambi kwakho lonke uluhlu lwefonti efakwe kwikhompyutha yakho.
Ukuba izinto zetekisi ezidalwe ngesitayela esithile ziya kuba nobukhulu obuhlukeneyo kumzobo, ngoko kulungele ukugcina intengo yokuphakama njengento ekhoyo kwibhokisi yencoko. Oku kuya kuthetha ukuba naliphi ixesha esenza itekisi ukusuka kumgca, i-Autocad iyasibuza loo xabiso. Ukuba, ngakolunye uhlangothi, zonke izinto ezibhalwe kwisitayela zifana nobukhulu obufanayo, ngoko kuya kulungele ukubonisa oku, oku kusisindisa ixesha ekudalweni kwezinto zetekisi, kuba asifanele sithinte ukuphakama rhoqo.
Ukufika kwale ngongoma, sibona kwividiyo "uMphathi weendlela zokubhala".
Kudla ngokuthi ubukhulu isicatshulwa luncedo xa kusenziwa umzobo, akufanelekanga xa umzobo okufanayo ntetho ukuba akafumaneki okanye ipapashwe ngekhompyutha, umxholo sibona kwi 29 kunye 30 izahluko, njengoko kwezinye ukuba isicatshulwa sinokuba sincinci kakhulu okanye sikhulu kakhulu, esiya kusiphoqelela ukuba sihlengahlengise ubungakanani bezinto ezahlukeneyo zetekisi kwimifanekiso yethu, enokuba nzima nakakhulu nangona kusetyenziswa izitayela zombhalo. Kukho izisombululo ezahlukeneyo zokusombulula ingxaki. Olunye ukusebenzisa umyalelo sikala ubungakanani bokubhaliweyo, kodwa ethile yayo ephambili ukuba ubandakanya ekukhetheni izinto ezahlukeneyo zeetekisi ukutshintsha, kunye nengozi lisuswe kwezinye kwaye akonwabanga isiphumo. Isisombululo sesibini siza kudala isitayela sombhalo kunye nobukhulu obuchanekileyo, ukubeka ubude. Xa senza iintetho zokushicilela, sinokuzicwangcisa ubungakanani bombhalo ngokuguqula isitayela esisetyenzisiweyo. Ukungalungi kukuba zonke izinto zetekisi kufuneka zibe ngobukhulu obunikwe isitayela (okanye izitayela) ezisetyenziswayo.
Isindululo ngu Autodesk isisombululo kuthiwa "ipropati annotative" leyo, kanye iyasebenza kwizinto okubhaliweyo wadala kunye nesimbo, ungenza ngokukhawuleza nangokulula ukulungisa isikali ezi zinto, mhlawumbi ngenxa isithuba model kuyo umzobo, okanye indawo yokubonisa ngaphambi kokudweba umzobo. Njengoko umGaqo kwisikali into itekisi, nokuba izinto ezahlukeneyo abe nobukhulu obahlukeneyo enye unobumba ngamnye, njengoko ngamnye uya ilingane kwisikali esitsha ezichazwe ngokugcina umahluko bulingane nobukhulu phakathi kwabo. Ngoko ke, qaphela ukuba Kukhethwa ukuba ukusebenzisa ipropati annotative iindlela ngeendlela ezintsha okubhaliweyo othe wena ukudala, ngoko uyakwazi uguguqula kancincane isikali nesiboniso izinto kwiindawo ezahlukeneyo ukuzoba yakho (ngumzekelo okanye ingxelo, nto leyo eza kufundwa umzuzu wakho), ngaphandle kwemfuneko yokuyihlela kamva.
Kwelinye icala, uya kaninzi isifundo lwepropati annotative njengoko izinto dimensions, izivingco, nokumelana, iinkokeli ezininzi, iibhloko kunye neempawu, kwakunye njengezinto yombhalo, nabo, nakuba , ngokuyisiseko, isebenza ngokufanayo kuzo zonke iimeko. Ngoko siza kufundisisa ngokucacileyo kamva, xa sihlolisise ukungafani phakathi kwendawo yesimo kunye nesithuba sephepha.
Ekugqibeleni, kwingxenyana engezantsi yencoko yababini sinokubona ukuba kukho icandelo elibizwa ngokuthi "Imiphumo ekhethekileyo". Ezi ndlela zintathu ngakwesobunxele azidingi ukuvakalisa izimvo kuba iziphumo zabo zicacile: "Hlahla phantsi", "Kucatshulwa ngakwesobunxele" kunye ne "Uluhlu". Ngenxalenye yayo, ukhetho "Ububanzi bodala / ukuphakama" ku-1 njengexabiso elingaphantsi, ngaphezu kwalokhu, itekisi ikhulisiwe ngokuzenzekelayo; ngaphantsi komnye isivumelwano. Ngaloo ndlela, "i-angle oblique" ifaka isicatshulwa kwinqanaba elibonisiweyo, ngencazelo yalo xabiso.
Post edlulileyo«Edlulileyo izinto umbhalo 8.2 Ukuhlela
Post Next 8.4 emininzi TextOkulandelayo "